Isamsung irhoxisa umcimbi weGlass Fold e China | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Isamsung iyarhoxisa ukuthengiswa kwangaphambili kweGlass eTshayina
Kule veki bebesiza kuthi iindaba ezahlukeneyo malunga neGolden Fold. Iselfowuni enokusonga i-Samsung kuba yimpumelelo ekubhukeniNgapha koko, sele ithengisiwe kwezinye iimarike. Ngaphandle kwamathandabuzo iyenza icace inzala abathengi abanayo kule fowuni yohlobo lweKorea. Nangona ayizizo zonke iindaba ezilungileyo zorhwebo.
Kuba iiGold Folds ezininzi zazibolekisiwe kwiintatheli ezahlukeneyo, ukuze bavavanye ifowuni. Into engakhange ihambe ngokuchanekileyo, kuba uninzi lwabo luye lwava iingxaki zescreen sefowuni. Ezinye zeengxaki eziphandwa yiSamsung ngoku.
Kodwa, kuyathekelelwa kuba ezi ngxaki zinokwenzeka cinga ukulibaziseka ekumiselweni kweGolden Fold kwintengiso. Ukufika komnxeba kwimakethi yaseYurophu kucwangciselwe ukuqala kukaMeyi. Inkampani ibinomcimbi othengiswe kwangaphambili e-China kule veki, ngenxa yezi ngxaki, urhoxisiweyo.
Ekuqaleni kwaphawulwa ukuba Indawo apho lo msitho wawuza kubanjelwa khona yayingafanelekanga. Nangona sele zikho iindlela zokucebisa ukuba yile ngxaki yescreen sefowuni ebangela ukurhoxiswa. Ke kubonakala ngathi imeko inzima kwaye inkampani ithatha zonke iintlobo zamanyathelo.
Okwangoku Isamsung ayithethanga kwanto malunga nokulibaziseka okunokwenzeka ekusungulweni kweGold Fold. Nangona amazwi akhomba koku kusenzeka ayanda. Yinto yokwenene enokwenzeka, kuba kude kube ngoku akukwazeki ukufumanisa esona sizathu sokungaphumeleli kwiscreen sesixhobo.
Ngokuqinisekileyo bathembisa ukuba baya kuba noxinzelelo kwiintsuku ezimbalwa zeSamsung. Kuba le fowuni ibaluleke kakhulu kwi-brand. Kuya kufuneka sazi ngakumbi malunga nokukhululwa kwayo okanye ukurhoxiswa kungekudala. Siza kujonga kwezi yure zimbalwa zizayo, ezithembisa ukuba zibalulekile kule Galaxy Fold. Ucinga ukuba kuya kwenzeka ntoni ngokusungulwa kwefowuni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Isamsung iyarhoxisa ukuthengiswa kwangaphambili kweGlass eTshayina
I-Nubia Red Magic 3 yenza ukubonakala kukhuphiswano lokudlala